विश्वभर भाइरल बनेको यो उल्लुको के हो रहस्य ? (भिडियो हेर्नुस्) – My Blog
No Comments on विश्वभर भाइरल बनेको यो उल्लुको के हो रहस्य ? (भिडियो हेर्नुस्)
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरेको पहुँचमा छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण केही पनि चिज केही बेरमै विश्वभर भाइरल बन्ने गरेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा बेलाबेलामा विभिन्न जनावरका भिडियो, तस्बिर भाइरल हुदैँ आएका छन् । यसैबीच अहिले एउटा उल्लुको भिडियो भाइरल बनेको छ ।
उल्लूलाई धेरैले शुभ मान्छन् भने कतिपयले अशुभ मान्दछन् । धार्मीक राय अनुसार उल्लु प्रति आआफ्नै धारणा हुन सक्छ । तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको यस भिडियोले धेरैको मन जितेको छ । खासमा यस भिडियोमा उल्लुले २७० डिग्रीसम्म टाउको घुमाएर चर्चामा आएको छ ।
भिडियोको शुरुवात उल्लु भनेर नचिने भिडियोमा बसेको उल्लुले टाउको घुमाएपछि बल्ल यसको वास्तविकता थाहा हुन्छ । अन्यथा भिडियोको शुरुवातमा यो कुनै खेलौना टेडी बियर जस्तो देखिन्छ । टाउको पुरै पछाडी फर्काएर बसेको उल्लुले अचानक अगाडी टाउको ल्याउँछ । यो हेर्दा जादु जस्तो देखिन्छhttps://twitter.com/rupin1992?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1398636204338282501%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.etajakhabar.com%2F384870%2F
← यी हुन् कोरियमा प्रहरी अधिकृत भएकी नेपाली चेली, कसरी पाइन् यस्तो सफलता ? → ग’र्भप’तन गराउने औ’षधी खु’वाउँदा जिउँदै छोरी जन्मेपछि